भूत प्रेतमा विश्वास गर्नु हुन्न भने यो हेर्नुहोस्, क्यामेरामै रेकर्ड भयो आवाज, सिंगो टोल त्रासमा ! – Complete Nepali News Portal
ScotNepal February 3, 2018
भूत प्रेतमा विश्वास गर्नु हुन्न भने यो हेर्नुहोस्, क्यामेरामै रेकर्ड भयो आवाज, एउटा सिंगो टोल त्रासमा – SIDHA KURA JANTA SANGA!! EPISODE 180
धेरै मानिसलाई लाग्छ कि स्थाई सरकार बनेपछि सारा समस्या समाधान हुन्छन् । निराश हुनु हुँदैन तर आशा गर्ने ठाउँ पनि त चाहियो । अब बन्ने सरकारले जनतामा आशा जगाउने नै हो भने केही काम गरोस् । पहिलो कुरा केहि राजनीतिक विचौलियाहरु छन् जसलाई जुन पार्टीको सरकार आएपनि जो प्रधानमन्त्री भएपनि फरक पर्दैन । पत्ता लगाउने काम तपाँईहरुको हो तर म क्लियरली भन्न चाहन्छु । हरेक राजीतिक दलमा पैसाको डिल गरेर नहुने काम हुने र हुने काम नहुने गराउने व्यक्तिहरु छन् ।
ठेक्का, टेन्डर, सरुवा, बडुवा, नियुक्तिमा रेट तोकेर पैसाको चलखेल हुन्छ । यस्ता डिल गर्नेहरु प्रत्यक पार्टीका सबैभन्दा ठुला नेताका नजिकका मानिसहरु हुन्छन् । ठुला नेताज्युहरु, तपाँईका पुराना विश्वास पात्र अथवा जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त नजिकको मानिसहरु कि त तपाईलाई जानकारी गराएर कि तपाईको नाम बेचेर करोड करोडको डिल गर्छन् ।
आफ्नो नाक अगाडि यस्तो डिल भएको तपाई जस्तो कागको फुल चोर्ने नेताले थाहा नपाउने त हुनै सक्दैन् । बरु डिल गर्ने अनुमति दिनु हुन्छ र थाहा नपाएको नाटक गर्नु हुन्छ होला । यतिखेर पनि केही आसेपासेहरु मन्त्री हुने लिष्टमा आफ्नो नजिकको नेताको नाम छ भनेर मुख मिठ्याई रहेका छन् ।
अथवा फलानो व्यक्ति मन्त्री हुने पक्का छ भनेर धेरैको हड्डी अहिल्यै देखी हाँसी रहेको छ । लेखेर राख्नुस् आफ्नो नजिकको सम्बन्ध भएको नेता मन्त्री भएको दिन यीनले उधारो मा भएपनि पार्टी दिन्छन् । तर यिनको खुशी मेरो नेता मन्त्री भयो अब देश बन्छ भनेर होइन आफुले भनेको चल्छ भनेर हो । र भन्छन् के, त्यो हामीले बर्षौदेखि देख्र्दै आएका छौ ।
हुन त देशको चिन्ताले विचाराहरुको भुँडी बढेको बढ्यै छ । सबका सबलाई खराब देख्न मति भ्रष्ट भएको छैन हाम्रो र तर पोलिटिकल ब्रोकरसँग धेरै जनाले आफ्नो गाँठीलो सम्बन्ध बनाइसके । त्यस विचमा प्रत्यक राजनीतिक दलका इमान्दार मानिसहरु आफ्नो निष्ठा र आर्दशको लिलामी गर्ने कि नगर्ने भनेर दोधारमा बाँचेका छन् ।
पैसाको बिटो बोकेर हिजो उम्रेको ब्रोकर नेताज्युको बेडरुममा मान्छे कुट्ला झँै छिर्छ तर बर्षौ सिन्द्धान्त, निष्ठा र आदर्श बोकेर देश बदल्न आजीवन पार्टीको झण्डा बोकेको इमान्दार कार्यकर्ता आधा दिन कुरेर आफ्नो नेतालाई मुस्कीलले एक थान नमस्कार गर्न पाउँछ । जसलाई नेताजीले भरसक देख्दैनन् र झुक्कीएर देखी हाले पनि गाडी चढिसकेपछि बन्द हुँदै गरेको सिसाले छेकिसक्छ । सरसफाई नेताज्युहरुले आफ्नो घर र सचिवालय तिरबाट शुरु गरेको दिन देश सुन्दर हुन थाल्छ । निराश हुनु हुँदैन, आशा गर्ने ठाँउ चाहियो ।